Home News Maxaa kajira in Shariif iyo Xasan Sheekh looga yeeray Xarunta Xalane
Maxaa kajira in Shariif iyo Xasan Sheekh looga yeeray Xarunta Xalane
Warar aan ka helnayo xubno ka tirsan Xisiga Himilo Qaran ayaa inoo sheegay in Beesha caalamka ee fadhigooda uu yahay xarunta Xalane ay u yeereen Hoggaanka Madasha Xisbiga Qaran oo iyagu si aad ah ugu kacsan Xukuumadda talada dalka heysa.
Hoggaamiyaha Madasha Xisbiga Qaran Sheikh Shariif,Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno ka tirsan Madasha ayaa la sheegay iney u yeereen xubno ka tirsan Beesha caalamka gaar ahaan Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay Soomaaliya James Swan,kuwaasi oo saacadaha soo socda garaya xarunta Xalane si ay ula kulmaan Beesha caalamka.
Lama oga ujeedka laga leeyahay,balse sida aan warar hoose aan ku helnay xubnaha Beesha caalamka ayaa doonaya iney Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran kala hadlaan marxaladda uu dalka marayo iyo in la dejiyo xasaradaha siyaasadeed ee taagan.
Sidoo kale, waxay isla soo hadal qaadi doonaan nuuca doorashada la filayo iney dalka ka dhacdo 2021,taasi oo Xisbiyada dalka looga baahan yahay iney aragtidooda ku darsadaan,inkastoo shaki uu ka jiro in doorasho waqtigeeda ku qabsoonto.
Qaramada Midoobay ayaa si qoto dheer isha ugu heyso xaaladda siyaasadda Soomaaliya,waxayna walaac ka muujisay marxaladda hadda lagu jiro hannaanka maamul ee Dowladda dhexe ee dalka.
Hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran iyo Madaxda Villa Soomaaliya ayaa haatan qar iyo qir kala taagan wuxuuna xaalka u muuqdaa mid faraha ka sii baxaya haddii aan la daba qaban